UKUPHONONONGWA: NGABA UYAYITHANDA ICOOPERS? HAYI! HAYI KHANGE. - ANTHONY MACKIE
Ukuphononongwa: Ngaba uyayithanda iCoopers? HAYI! Hayi khange.
Nditsalele iScrooge konke okufunayo, kodwa imovie entsha yeKrisimesi Thanda iiCoopers ngumboniso bhanya-bhanya endiwuthandayo, NGOKWENENE andiwuthandi. Ngapha koko, ndicinga ukuba ndiyayithiya. Kwaye nditsho ukuba njengomntu onendawo engathandabuzekiyo ethambileyo yeemovie zeholide, uninzi lwazo endazi kakuhle ukuba azilunganga. Ukusuka kwii-classics ukuya kwii-comedies ukuya kwiifilimu zale mihla, ndilula kakhulu xa kusizuzwa ukuba uphumelele. Into endiyithandayo mhlawumbi yasemva kwemfazwe Kwenzeke kwi-5 Avenue (ihlaya eliphantsi kakhulu), kodwa ndikulungele ukunika ukupasa kwezi bhanyabhanya zininzi zeefilimu malunga neentsapho ezingasebenzi kakuhle eziza kunye ukuze zichwayite (kwaye mhlawumbi ne-eggnog encinci). Kodwa bekukho into malunga Thanda iiCoopers oko akuzange kundishiye nje ndibanda kwaye ndidanile… oko kwandenza ndaphambana.
Inxalenye yale nto inokuba yinto yokuba bendisandula ukubukela enye imovie yekrisimesi, Ilitye loSapho , ethi ngaphandle kweziphene ezithile ibengcono kakhulu ekubetheni amanqaku eemvakalelo afanelekileyo. Into ethi imovie ikwazi ukuyenza kukubethelela imeko eyiyo yosapho ejonge ngqo kubalinganiswa kwaye ityebile ngokweenkcukacha, kodwa nakwindalo yonke. Thanda iiCoopers luchasene ngqo. Abalinganiswa baziva besiqhelo kwaye bengeyonyani, kangangokuba ndacinga ukuba akukho sapho kwihlabathi linje. Umntu wonke umlingiswa wayeqonde ngqo kwi-movie yeHallmark ene-cliché, iingxaki zomhla ongaqhelekanga. Uqhawulo-mtshato kunye nokungatshati yeyona nto iphambili kule ntsapho, kwaye ngelixa ezo ziyinyani uninzi lwethu esele lujongane nayo, baphathwa njengeentlekele ezifanele ukoyiswa lolu sapho. Inyaniso yokuba elinye lala malungu osapho liyi-kleptomaniac ibonakala ingabalulekanga kangako kunokuba ingumama ophakathi ophakathi obonisa yedwa kwiKrisimesi yosapho.
steven iphela barn amaqabane amaFrentshi
Kwaye masingene kwenye yezinto ezindincumise kakhulu ngale bhanyabhanya. Le midlalo bhanyabhanya ibalaseleyo uDiane Keaton, uMarisa Tomei njengodadewabo, kunye no-Olivia Wilde njenge ntombi ka Keaton, kwaye le bhanyabhanya ikhohlakele kubo bonke aba badlali yamandla Kwiskrini kunye. Zimbalwa izinto ezindenza ndibe lusizi ngaphezu kohlahlo lwentsebenzo uDiane Keaton ebekhona kule minyaka ilishumi idlulileyo. Ukucinga ukuba uAnnie Hall okanye uJC Watt uza kujika abe ngabalinganiswa abadlalayo ngoku kubonakala ngathi kuyahlekisa. Udlale uninzi loomama abaphucukileyo kwiifilimu ngaphambili ( UYise woMtshakazi, iLitye loSapho ) kodwa yena Thanda iiCoopers Umlinganiswa ngokucacileyo usondele kubasetyhini ababhikisiweyo, ababhinqileyo ababhala kuwo Umtshato Omkhulu kwaye Kuba ndithe S o. Kuyakhathaza ngakumbi kuba andikholwa okomzuzwana ukuba uDiane Keaton okanye u-Olivia Wilde bakholelwa ngokwenene kwingxwabangxwaba abalinganiswa babo malunga noWilde bengatshatanga kwiminyaka yakhe. Kutheni le nto inokuba luxinzelelo kusapho phakathi kwaba bafazi babini kangangokuba uWilde abhenele kwisoka lobuxoki (uJake Lacy)?
UTomei, othanda uKeaton unokuphola ngandlela thile okwaziyo ukugqitha kwiindima zakhe ezibi kakhulu, ngokucacileyo wenza iinzame zokuzisa ubomi kumntu wakhe obhalwe kakubi, kodwa uninzi lwefilimu lumenza ukuba akhuphisane kakhulu noKeaton kwaye uzama ukuthetha ngokubamba kwakhe ipolisa (Anthony Mackie) ukuba aphume egumbini. Emva koko sinoEd Helms, ongenzi mzamo wokuzisa ubomi kwisimilo sakhe esibuhlungu. I-Helms idlala utata oqhawule umtshato, ongasebenziyo ongayi kuba phambili kunye nowayesakuba ngumfazi wakhe malunga nemali yabo xa kufikwa ekuthengeni izipho zeKrisimesi (kwaye kufanelekile ukuba simthiye ngokufuna ukuyokuthenga). Ndiyazi ukuba uninzi lweemovie zifuna ukudideka okwenziweyo, kodwa izizathu ezonqenayo zokubamba ulwazi zindikhathaze. Kwaye akuncedi ukuba u-Amanda Seyfried kubonakala ngathi uyinto ye-Helms 'kunye notatomkhulu wakhe (Alan Arkin). Phosa u-John Goodman ongeyena mlinganiswa kwaye ulungile kakhulu kwisiqwenga. Intle ukuswela isenzo kunye neengxaki (oku kuchasene neemovie ezigcwele-jam ezinje Uthando Ngokwenene ), Ukanti ibali ngandlel 'ithile lisengumbeko.
i-star wars iivili zamandla ezinamandla
Kukho enye i-STAR ekufuneka ndiyibonisile, kuphela ngenxa yokuba ubukho bakhe bundiqhubela amandongomane. Khange ndiqonde ukuba uSteve Martin ubalise le movie. Kwaye ilizwi lakhe eliqhelekileyo kodwa elingasoloko libonakala laliphazamisa. Ngenye, ndicinga ukuba wayezama ukuhambisa ingxelo Ibali leKrisimesi , kodwa loo ngxelo yayinomdla kunye nobuntu bukaMartin. Andazi ukuba leliphi ilizwi eliyimfihlakalo bekufanele ukuba linxibelelene nomdlalo bhanyabhanya okanye usapho… lelinye nje ilizwi elivalelweyo elizama ukuvakala njengomntu ovela kwi-NPR. Ingxelo ikwavakala ngathi iphuhlisiwe ukujova imvakalelo kwaye umboniso bhanyabhanya wasilela ukwenza kwiscreen. Abalinganiswa bazo zonke iintlobo zomthi kangangokuba akunakwenzeka ukuba unxibelelane nabo (okanye ukhathalele okwenzekayo), kunye nokulandelelana kwamaphupha yinto nje engekhoyo. Ngexesha, wonke umntu wayebonakala encumile kwaye ehleka kwindawo, kodwa njengemizobo yosapho ethathwe kule bhanyabhanya, akukho nto inyanzelisa le ndlela yokuziphatha. Inkangeleko yemovie ngokufanayo iyabethabethana kwaye iyahlekisa, ngokuqaqamba kwale bhanyabhanya yeKrisimesi! ngaphezulu kwefilimu yonke. Ukuba le yayiyintengiso okanye iparody kwezi ntlobo zeefilimu ngendihleka, kodwa njengesiqhushumbisi, akukho nto ihlekisayo ngale bhanyabhanya.
Ndiqinisekile ukuba le movie iya kwenza kakuhle; Sele ndiyifumene kufanelekile ukuba ndiyibone loo nto kubazali bam (hayi, hayi abafanele!). Kodwa ngokujonga indlela le movie ebicaphukisa ngayo ukuhlala, andinakuyicebisa nakubani na. Ukuba ungumntu othanda ezinye zeenkwenkwezi kule movie, uya kuba lusizi ukubona indlela ezisetyenziswa ngayo. Ukuba ufuna imuvi yasekhaya yabantu abadala ngeli xesha lonyaka, kuya kuba ngcono ukuba ubone IBrooklyn kule veki okanye ulinde into efana nale IDinosaur elungileyo (iminwe iwele) okanye Inenekazi kwiVan Kamva kule nyanga. Ngelishwa ukuba enye enkulu, iHollywood, umboniso bhanyabhanya wosapho esibonakala ngathi sifumana eli xesha lonyaka kukudana okukhulu, kodwa isibonelelo seefilimu zeholide kukuba unexesha lonke lokubukela izinto ezingcono ezize phambi kwale mahala.
U-Lesley Coffin ukufakelwa kweNew York ukusuka kumbindi mpuma. Ungumbhali / umhleli wepodcast osekwe eNew York Ifilimu negalelo lefilimu kwi Interrobang . Xa engakwenzi oko, ubhala iincwadi kwiHollywood yakudala, kubandakanya U-Lew Ayres: I-Hollywood's Objector ngenxa yesazela kunye nencwadi yakhe entsha Iinkwenkwezi zikaHitchcock: UAlfred Hitchcock kunye neHollywood Studio System .
Ilizwi lononkala kwi-moana
Isebenze njani i-tupac hologram
mna nawe umxholo ongathandabuzekiyo
iiarhente zokhuselo ezifunwa ngenkani
Indoda yesigcawu egodukayo umakazi unokuthi
Iintliziyo zobukumkani 2 iingcebiso zokugqibela zomxube
I-cowboy bebop pierrot le fou